Argagaxisada Al Shabaab oo dadka gobalada qaar caddaadis xooggan ku haaya!
Friday November 05, 2021 - 11:11:02 in Wararka by Sahal Muqdisho
Kumanaan qoys ayaa la xaqeejiyay ineey ku barakaceen deegaano' badan oo gobaladda Dalka Soomaaliya kamid ah, si gaara deeganadda, argagaxisada Al Shabaab maamusho, Caddaadisyo' xoog leh oo, ay ' la kulmen dababeed.
"Culeesyo iyo caddaadis" xoog leh ayaa soo wajahay, dadka ku nool deeganadda kala duwan ee Argagaxisada Shabaab, Galmudug iyo Hirshabele, ka maamusho .Gobalada Galgaduud iyo Mudug Kuma'nnaan ruux ayaa sanadahii aynu soo dhaaafay ku barakacay, kuwaa oo u badnaa xoolo dhaqato xoolahii, ay lahaayen hub iyo rasaas Maleeshiyaadka Al shabaab, ku iibsadeen. Halka caruur badan oo aay dhalleen si qasaba hub loogu dhiibay, halka inta soo hartay Muqdisho. Loola soo cararay si' loogu Bad-baadiyo in sida xaabada dabka dagaalada loogu isticmaalo.
Qaar kamid ah dadka, Nafsadoodda la soo baxsaday oo nala hadlay' balse codsaday innaan magacyadooda Warbaahinta loo adeegsan, sababa amaankooda la xariira. ayaa sheegay inaay, isaga soo carareen deeganadii ay ku noolayeen kolkii kooxda Shabaab, ku bilaawday, dadka shacabka, qaab qasaba inay ugu qortaan maleeshiyaad. u dagaalama iyaga oo sidoo kale tilmaamay dadka kooxda Shabaab! Ka Diida ammarkooda qaldan in uu xagooda u aqoonsanayan Cadow' lamid ah midkeey dagaalka kula jiraan. Taaso qasabtay inaay isaga hayaan guryahooda.
Meelaha ugu badan oo ay dadku ka barakaceen, sanadahii ugu dambeeyay, waxaa Maamul Gobaleedka Hirshabele, Tuulooyinka ku teedsan Magaalada Jowhar, sida tuulada War Ciise, war dhagax" Aqab duco Biyo cadde iyadoo ay u dheer 'tahay dhibaatada Maleeshiyaada Shabaab kuhayso. Waxaa u dheeriya xaaladdo beni'aadanimo, oo kamid yahiin fataahada, wabiga. daggaalo salka ku haaya" aanoyin qabiil.
Dadka isaga soo cararay guryahooda" deeganaddan kor ku soo xusnay baqdinta iyo Cadaadisyada, kooxda Shabaab, kaga imaanayay awgeed, ee Magaalada Muqdisho, soo gaaray. Mar labaadna danta ku qasabtay ineey isaga, sii tagaan' kadib fariimo baqdin gelin kooxda shabaab oo ay naftooda horay ugukala soo cararen sababtay ugu danbeyn dalka in ay isaga baxaan.
Written : BY Nur Ismail Sheikh